Semalt गुगल विज्ञापनहरूमा9सब भन्दा आम गल्तीहरूको चेतावनी दिन्छ
त्यहाँ केवल एक कम्पनी छ कि खराब विज्ञापन Google विज्ञापन अभियानबाट पैसा बनाउँछ - त्यो Google हो। यो विज्ञापन सुरु गर्न धेरै सजिलो छ। यद्यपि, सही ज्ञान बिना, तपाईं पीडादायी रूपमा एक बगैर कुनै अभियानको प्रभावहरु लाई महसुस गर्नुहुनेछ। कसरी सजिलै बजेट बचत गर्ने र धेरै क्लिकहरू प्राप्त गर्ने? तल लेख पढ्नुहोस्!
गुगल विज्ञापनहरू प्रयोग गर्नु किन राम्रो हो? र किन यो उनीहरूको बजेट को माध्यम बाट जलाउन को सजिलो छ?
गुगल खोजी नेटवर्कमा विज्ञापन प्रायः प्रयोगकर्ताहरूलाई विज्ञापनका रूपमा होइन - तर प्रश्नको उत्तरको रूपमा। यसका लागि धन्यबाद, तपाइँ निश्चित रूपमा तपाइँको लक्षित समूहमा पुग्नुहुन्छ जुन तपाइँको उत्पादन मा हाल रुचि छ। गुगल विज्ञापनमा, तपाईं सटीक लक्ष्य समूह को छनोट गर्न सक्नुहुन्छ - जनसांख्यिकी, by स्थान, वा रूचिहरू द्वारा। गुगलमा विज्ञापन अभियानको अर्को फाइदा छिटो छ। यो विशेष गरी तपाईंको कम्पनीको अस्तित्वको शुरुआतमा महत्त्वपूर्ण छ जब तपाईं बिक्रीको देखभाल गर्न चाहनुहुन्छ। मनपर्दैन स्थिति, मुनाफा कटनी मात्र केहि दिन मा हुन सक्छ।
गुगल विज्ञापनहरू तपाईंलाई अभियान सुरू गर्न प्रोत्साहित गर्नमा धेरै प्रभावकारी छ। यो कुपनको साथ प्रलोभन गर्दछ (जस्तै X spend खर्च गर्ने थप बजेटको वाई get प्राप्त गर्न), यो परामर्शदाताहरूको सहयोग Semalt एजेन्सी र एक धेरै साधारण अभियान प्रक्षेपण जस्तै। प्रक्रिया धेरै सजिलो छ। त्यहाँ कसैलाई आर्थिक पीडादायी ठोकरहरू छन् जसले विषयको अध्ययन गर्न समय खर्च गरेका छैनन्।
एक सम्भावित ग्राहकले प्रत्येक महिना १२,००० डलर खर्च गरे (Google द्वारा सुझाव गरिएको बजेट)। खाताको लेखा परीक्षण गर्दा हामी यो निष्कर्षमा पुगेका छौं कि केवल ,000००० डलर मात्र पर्याप्त हुनेछ, राम्रो परिणामहरूका साथै - निश्चित रूपमा उपयुक्त अनुकूलन अभियान को।
एक ग्राहकको दैनिक budget २०० को बजेट थियो र पूरा मासिक बजेट $ $$० मा सेट गरियो। यसलाई गुगल विज्ञापन सल्लाहकारले सुझाव दिएका छन जसले छिटो परिणाम देखाउन र लगानी गर्न प्रोत्साहन दिन चाहान्थे।
गुगल विज्ञापनमा बोलपत्र
प्रति क्लिक दर उच्च, तपाइँको विज्ञापन अधिक अक्सर देखा पर्छ। दर उद्योग, बजार, र गुण स्कोर द्वारा फरक हुन्छ। गुगलले बजेट सुझाव दिन्छ - तर तपाई यसलाई सँधै धन्यवाद कम गर्न सक्नुहुनेछ प्रभावकारी अभियान अनुकूलन।
गल्ती â „- १ कुनै मेल नभएको कुञ्जी शब्द राख्दै
एक गल्ती जुन निश्चित रूपमा तपाइँको बजेट खान्छ र तपाइँलाई कुनै मूल्यवान ट्राफिक ल्याउँदैन व्यापक मिलान कुञ्जीशब्द चयन हो। त्यसैले वाक्यांशको साथ तपाइँको विज्ञापन, जस्तै "क्याटोविस लेखा कार्यालय" सबै वाक्यांशहरूमा प्रदर्शित हुनेछ जसमा "कार्यालय", "लेखा" वा "क्याटोवाइस" शब्दहरू छन्। तपाई त्यो चाहनुहुन्न।
ग्राहकले "मिलाफ वितरण" शब्द एक ब्रोड म्याचमा सेट गर्दछ। उसको विज्ञापन कुन वाक्यांशमा देखा पर्‍यो? औषधि वितरण। वास्तवमै उसको योजना अनुसार छैन।
ग्राहकले वाक्यांश प्रयोग गर्‍यो "विज्ञापन बोर्डहरु"। सब भन्दा ठूलो ट्राफिक "Pyrzowice आगमन र प्रस्थानहरू" भन्ने वाक्यांशबाट थियो - र यसले बजेटको ठूलो हिस्सा खपत गर्‍यो।
मिलान बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गर्नुहोस्! सटीक मिलान वाक्यांश (वर्ग कोष्ठकमा) केवल त्यस कुञ्जी शब्दका लागि मात्र प्रदर्शित हुन्छ। वाक्यांश मिलान (उद्धरण चिन्हहरूमा) केवल कुञ्जी शब्दहरूको लागि मात्र देखा पर्नेछ जुन यो वाक्यांश छ - त्यो हो, "बिलबोर्ड" "क्याटोविस बिलबोर्ड" वा "सस्तो बिलबोर्ड" मा देखा पर्नेछ। एक Modifier (जोडको साथ) सँग मिल्दो वाक्यांश जस्तो समान, तपाइँले चयनित खोजशब्द समावेश गर्ने वाक्यांशहरूको लागि विज्ञापन प्रदर्शन गर्दछ। फरक यो छ कि शब्दहरूको क्रम महत्त्वपूर्ण छैन - त्यसैले विज्ञापन दुबै "क्याटोविस विज्ञापन बोर्ड" र "क्याटोवाइज विज्ञापन बोर्डहरू" मा प्रदर्शित हुनेछ।
जब तपाइँको कुञ्जी शब्द योजना कोर्नुहुन्छ, जोडहरुमा ध्यान दिनुहोस्।
नकारात्मक मिल्दाको बारेमा नबिर्सनुहोस् - यस तरिकाले तपाईले यस्ता शब्दहरू हटाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईले प्रदर्शन गर्न चाहानु हुन्न। यदि तपाईंलाई थाहा छ कि एल्लेग्रो वा ओएलएक्सको तपाईंको भन्दा सस्ता उत्पादनहरू छन्, तपाईं यी ब्रान्डहरूलाई नकारात्मक शब्दहरूको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
कसरी तपाइँको वेबसाइट को लागी सबै भन्दा राम्रो वाक्यांश छनौट गर्न?
एक उपयोगी उपकरण कीवर्ड प्लानर हो, जुन गुगल विज्ञापन उपकरणमा सिधा अवस्थित छ। यहाँ तपाइँ वाक्यांशहरू प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको दिमागमा आउँनेछ, र योजनाकारले देखाउँनेछ कि दिईएको शब्द प्रति महिना कति खोजिन्छ र यसको दरहरू कस्तो हुन्छ, र अन्य समान वाक्यांशहरूको सुझाव दिन्छ।
कसरी लक्ष्य समूह छनौट गर्ने?
याद गर्नुहोस् तपाईको सब भन्दा राम्रो ग्राहक भर्खर को हो - तिनीहरूले धेरै किन्थे, समयमै पैसा तिर्ने गर्थे, सचेत थिए, राम्रोसँग कुराकानी गर्थे - र यस आधारमा आदर्श ग्राहक छनौट गर्नुहोस्, अर्थात् लक्षित समूह।
गल्ती â „- २. धेरै विज्ञापनहरू एउटा विज्ञापन समूहमा भरिएका थिए
विज्ञापन विशेष विज्ञापन समूहहरूमा देखाईन्छ। एउटा गल्ति हो कि सबै कुञ्जी शब्द एक विज्ञापन समूहमा थप्न र यसको आधारमा 1-2 विज्ञापन रचनात्मक सिर्जना गर्न। मुख्य वाक्यांश विज्ञापनको सामग्रीमा हुनुपर्दछ। यदि तपाईं मग, बोर्ड, पत्रकहरूको लागि सिर्जनाहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ - ती मध्ये प्रत्येकको आफ्नै विज्ञापन समूह हुनुपर्दछ, सामान्यतया विज्ञापन ग्याजेटहरूमा सम्बन्धित छैन। आज, यो एकल कुञ्जी शब्दहरूको लागि एक विज्ञापन समूह र धेरै फरक रचनात्मकहरू गर्न अधिक र अधिक सामान्य छ।
गुगल विज्ञापनमा गुण स्कोर
क्वालिटी स्कोर अफर, खाता इतिहास, ल्यान्डि page पृष्ठ मिलान, क्लिक योग्यता - मा मिल्दो वाक्यांशबाट प्रभावित हुन्छ। त्यसो त तपाईं राम्रो विज्ञापनहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ, तपाईंसँग उच्च गुणवत्ता स्कोर हुनेछ। र गुगल तपाईंलाई कम बोलपत्र र उच्च रैंकिंगको साथ पुरस्कृत गर्दछ।
गलत â „- the. प्रदर्शन र खोज नेटवर्क छनौटमा मतभेदहरू थाहा नपाई
महत्वपूर्ण! खोज नेटवर्क गुगल विज्ञापन परिणामहरूमा देखा पर्ने टेक्स्ट विज्ञापनहरू हुन्। अर्कोतर्फ, विज्ञापन नेटवर्क इन्टरनेट पोर्टलमा देखा पर्ने विज्ञापन सिर्जना हो। एक अभियान सेट अप गर्दा, धेरै व्यक्तिहरूले दुवै पूर्वनिर्धारितद्वारा छनौट गर्दछन् - तर नेटवर्कहरू धेरै फरक छन्।
खोज नेटवर्क अधिक महँगो छ, तर योसँग उच्च क्लिक-थ्रु दर (CTR) पनि छ - यो धेरै प्रतिशत हो। अर्कोतर्फ, विज्ञापन नेटवर्क धेरै सस्तो छ, तर यसको CTR धेरै प्रतिशत हो। यसैले, यदि तपाइँ मूर्खतापूर्वक विज्ञापन नेटवर्क प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको समग्र CTR कम गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाइँको गुणवत्ता स्कोर पनि कम गर्दछ। CTR मा भिन्नता यो हो कि विज्ञापन नेटवर्कमा व्यक्ति बिक्री चरणमा छैनन्, त्यसैले उनीहरूले तपाईंको प्रस्तावको फाइदा लिन आवश्यक पर्दैन।
विज्ञापन नेटवर्क प्राय: छवि उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसले ब्रान्ड जागरूकता र दृश्यतालाई बलियो बनाउँदछ - लोगो र नाम प्रदर्शित र सबै समयमा कहिँ सम्झिन्छन्। भविष्यमा, यदि ग्राहकले खरीद निर्णय गरेमा तिनीहरू फर्केर आउन सक्छन् तपाईंको साइट।
मेरो अनलाइन स्टोरको लागि कस्तो प्रकारको विज्ञापनहरू मैले रोज्नु पर्छ?
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, हामी जहिले खोज नेटवर्कमा टेक्स्ट विज्ञापनहरू सिफारिस गर्दछौं - यसको लागि तपाईं हालै तपाईंको उत्पादन/सेवा खोजिरहेका व्यक्तिहरूमा पुग्नुहुनेछ। अर्को चरण पुन: बजार गर्दै छ - ती ग्राहकहरूको प्रदर्शन नेटवर्कको सम्झना गराई जो तपाईंको साइटमा थिए र खरीद गरेनन्। गुगल शपिंग पनि एक राम्रो विकल्प हो।
गुगल शपिंग विज्ञापन
यो अझै कम प्रतिस्पर्धी क्षेत्र हो किनकि तपाईंको अभियान सेट अप गर्न अझ धेरै कामको आवश्यक पर्दछ। क्लिकको लागत कम छ। यद्यपि सबै उत्पादनहरू यसका लागि उपयुक्त छैनन्। तिनीहरू मूल्य, पहुँच र दृश्यता सर्तमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनुपर्दछ - किनभने प्रतिस्पर्धा प्रस्तावहरू तपाईं पछि देखिनेछन्। जे होस्, यो तपाइँको उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्न एक उत्तम तरिका हो।
बजेट र अभियान आकार
यदि तपाईंसँग सानो बजेट छ भने, केहि चयन गरिएका वाक्यांशहरू सुरू गर्नुहोस् सब भन्दा महत्त्वपूर्ण उत्पादनहरूको लागि र २/3 हप्ताको लागि परीक्षण। ठूलो बजेटले तपाईंलाई बृहत रूपमा उत्पादन कोटीहरू वा कुञ्जी वाक्यांशहरू जाँच्न र मार्केटिंग वा विज्ञापन नेटवर्कको साथ तपाईंको अभियान विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ।
गलत â „- negative नकारात्मक वाक्यांश छोड्दै
तपाइँको विज्ञापनमा कुन वाक्यांश देखा पर्छ भनेर नियमित रूपमा जाँच गर्नुहोस्। नियमित आधारमा नकरात्मक वाक्यांशहरू पूरा गर्नुहोस् - तपाइँ प्रतिस्पर्धी वा वाक्यांशहरूको नाममा देखा पर्न चाहनुहुन्न जुन तपाइँको व्यवसायसँग पूरै असम्बन्धित छ। तपाईंले यहाँ रूपान्तरण फेला पार्नुहुने छैन र तपाईं आफ्नो बजेट जलाउन सक्नुहुन्छ।
गल्ती â „- Sk. स्किपिs विस्तारहरू
विस्तारहरूको प्रयोगको लागि केही पनि खर्च हुँदैन - केवल जानकारीको साथ उपयुक्त फिल्डहरू भर्नुहोस्। जहिले पनि, Google को अनुसार, एक विस्तार प्रदर्शन प्रासंगिक छ, यो प्रयोग गर्दछ। बिस्तारहरूले विज्ञापनलाई रचनात्मक रूपमा बढी आकर्षक बनाउँदछ, विज्ञापनको दृश्यता र सतह बढाउँदछ, प्रयोगकर्तालाई सूचित गर्दछ - र यसले थप क्लिकहरू निम्त्याउँछ। थप रूपमा, गुगल विस्तारका साथ विज्ञापन पुरस्कृत गर्दछ।
खोजी नेटवर्कमा तपाईंको पाठ विज्ञापनको सामग्रीमा के हुनुपर्दछ?
पहिले, प्रतिस्पर्धा जाँच्नुहोस् - यसले कुन विस्तारहरू प्रयोग गर्दछ, यसले कुन शीर्षक गर्दछ, यसले प्रचार गर्दछ, यसले कसरी विज्ञापनको सामग्री बनाउँदछ?
तपाईको सामग्रीले खोजशब्दहरू समावेश गर्नुपर्दछ - आदर्श हेडलाईन र शरीर दुवैमा - जसले क्लिक गर्ने सम्भावना बढाउँदछ।
तपाईंले सही व्याकरण, विराम चिह्न, र हिज्जे कायम गर्नुपर्दछ।
तपाइँ एक भन्दा बढी प्रश्न चिन्ह वा विस्मयादिबोधक बिन्दु राख्न सक्नुहुन्न, "सर्वश्रेष्ठ" जस्ता शब्दहरू - प्रत्येक विज्ञापन रचनात्मक एक कर्मचारीद्वारा हेरिन्छ र प्रदर्शन गर्न अनुमति दिइन्छ।
तपाईंले तपाईंको सामग्रीको अन्त्यमा कार्यमा कल गर्नुपर्नेछ।
विस्तारहरूले विज्ञापनलाई बढी आकर्षक बनाउँछ र यो प्रतिस्पर्धाबाट अलग राख्छ।
गल्ती â „- action. कार्यमा हराइरहेको कल (CTA)
CTA कार्यको लागि तथाकथित कल हो। यी जस्तै वाक्यांशहरू हुन् "आज यसलाई जाँच गर्नुहोस्", "हामीलाई जाँच्नुहोस्!", "फाइदा लिनुहोस्!"। यो शिशु देखिन्छ - तर यो काम गर्दछ। हामीले एउटा अभियानको लागि परीक्षण गरेका थियौं। हामीले CTA र CTR बिना विज्ञापन चलायौं। नतिजा एकतर्फी थियो: विज्ञापनहरू जसको अन्त्यमा एक्शन टु कल थियो पनि लगभग दुई पटक CTR थियो।
गल्ती â „- re. पुन: बजार छैन
औसत प्रयोगकर्तालाई खरीद निर्णय गर्न ब्रान्डको साथ7देखि १ h हिटहरू आवश्यक पर्दछ।
केवल क्लिक र वेबसाइटमा जान पर्याप्त छैन - प्रयोगकर्ताहरूको 3% लेनदेन गर्दछ। बाँकी छोड्नेछ। यो त्यहाँ मार्केटिंग तिनीहरूलाई पुग्छ, तिनीहरूलाई ब्रान्डको सम्झना गराएर, छविलाई सुदृढ पार्दै, र तिनीहरूलाई वेबसाइट फेरि भेट्न प्रोत्साहन दिँदै।
पुन: बजार बोरिंग र पुशी हुन सक्दैन। पाठ र ग्राफिक्स अब र कहिले परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ।
पुन: बजार बहु ​​- चरण हुन सक्छ - जस्तै अन्तिम //30०/60० दिनमा तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गर्नेहरूलाई। यी व्यक्तिहरू बिक्री फनेलको बिभिन्न चरणहरूमा छन् र बिभिन्न विज्ञापन सिर्जनाहरू आवश्यक पर्दछ।
घुमाउनुहोस् विज्ञापन - एकै उपयोगकर्ताले बिभिन्न सामग्रीका साथ बिभिन्न बिभिन्न विज्ञापनहरू देखाउनुहोस् जुन विभिन्न गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछ। नतिजाको रूपमा, विज्ञापनहरू अधिक प्राकृतिक रूपमा हेरिन्छ।
पुन: बजार: आफैंलाई सम्झाउनुहोस् जो तपाईंको साइटमा आएका छन् तर खरीद गरेका छैनन्।
गल्ती â „- You - तपाईं केवल अभियानमा हेर्दै हुनुहुन्छ - र तपाईं आफ्नो वेबसाइटको बारेमा सोच्नुहुन्न
तपाईंले अभियान सुरू गर्नु अघि, तपाईंले आफ्नो वेबसाइट राम्रोसँग तयार गर्नु आवश्यक छ। यो टेक्नोलोजी र उपयोगिताको हिसाबले ठीकसँग कार्य गर्नुपर्दछ। तपाईंको सम्भावित ग्राहकसँग हराउने अधिकार छैन - वेबसाइट रूपान्तरणको लागि तयार हुनुपर्दछ:
वेबसाइटमा सामग्री र ग्राफिक्स बिक्री प्रोत्साहन र उत्पाद को बारे मा सूचित गर्नु पर्छ।
वेबसाइट आफैंमा आधारभूत जानकारी हुनुपर्छ जस्तै कम्पनी विवरणहरू वा स्टोर नीतिहरू।
तपाईलाई क्लिक गर्न योग्य फोन नम्बर, ईमेल, सम्पर्क फारम चाहिन्छ, तपाई लाइभ च्याट पनि थप्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक प्रयोगकर्ताले सम्पर्कको बिभिन्न प्रकारलाई प्राथमिकता दिन्छ - तिनीहरूलाई छनोट दिनुहोस्।
महत्वपूर्ण! विज्ञापनबाट लि्क सीधा उप पृष्ठमा नेतृत्व गर्नुपर्दछ जुन विज्ञापन सम्बन्धित छ - एक वर्ग वा विशेष प्रस्तावमा। यदि विज्ञापनले उत्पादनको चिन्ता गर्दछ र तपाईं गृह पृष्ठमा लिंक गर्नुहुन्छ - प्रयोगकर्ता तुरून्त छोडिनेछ।
एउटा राम्रो डिजाइन गरिएको बिक्री पृष्ठ सफल गुगल विज्ञापन अभियानको लागि आवश्यक छ।
गल्ती â „- Google। गुगल विज्ञापन र एनालिटिक्स खाताहरू लिंक गरिएको छैन
गुगल एनालिटिक्स एक नि: शुल्क उपकरण हो जुन तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूको ब्यबहारिक डाटा देखाउँदछ - कति जनाले प्रविष्ट गरे र छोडे, कतिले अन्य उप-पृष्ठहरू देखे, उनीहरूमा उनीहरूले कति समय खर्च गरे - यो डाटा बिना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यो असम्भव छ। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कि कुन विश्लेषक र विज्ञापनले गुगल एनालिटिक्समा ट्राफिक उत्पन्न गरिरहेका छन्। यदि खाताहरू लि linked्क गरिएको छैन भने, गुगल विज्ञापनबाट ट्राफिक जैविक परिणामहरूबाट ट्राफिकमा प्रवाहित हुन्छ।
यदि गुगल ऐडवर्ड्स "स्पष्ट" काम गर्दैन भने, सबै कुरा फेरी जाँच गर्नुहोस्। तपाईं केहि गलत गर्दै हुनुहुन्छ र क्लिकहरू, भ्रमणहरू, र रूपान्तरण सुधार गर्न सही समाधान फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
कम दैनिक बजेट र केही तर प्रभावी सटीक मेल कुञ्जी शब्दहरूको साथ सुरू गर्नुहोस्। अनुकूलन गर्नुहोस् र तपाइँको विज्ञापन नियमित रूपमा मोनिटर र यदि तपाइँ देख्नुहुन्छ कि सबै फिट, तपाइँको बजेट अलि अलि बढाउनुहोस्। मेरो दृष्टिकोणबाट, एड्वर्ड्स अझै पनि नयाँ प्रयोगकर्ताहरू र ग्राहकहरू सम्म पुग्न एक उत्तम तरिका हो जबसम्म अभियानहरू राम्रोसँग सेट अप हुन्छन्।